www.xamarcade.com » Garoon Diyaaradeed iyo Deked kutaala Duleedka Muqdisho oo la qorsheenayo in dib loo howl galiyo
Garoon Diyaaradeed iyo Deked kutaala Duleedka Muqdisho oo la qorsheenayo in dib loo howl galiyo
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali Cosoble iyo Madaxweyne kuxigeenka Maamulkaasi Cali Guudlaawe
ayaa shalay kormeer ku tagay Dekadda Ceel Macaan iyo deegaanka Ceel cadde oo ku yaalla duleedka Muqdisho.
Madaxdan ayaa u kuur galayay xaalada nololeed ee dadka kunool Deegaanka Ceel Cadde iyo sidoo kale qiimeyn ay ku sameeyaan Dekaddii macmalka Ceel Macaan , waxa ayna halkaasi kula kulmeen qaar kamid ah waxgaradka ku nool deeganaada ay tageen.
Masuuliyiintan katirsan maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dib loo howl galiyo Dekadda macmalka ee Ceel Macaan iyo sidoo kale Garoonka Diyaaradaha Cisaley oo shaqeyn jiray 15-sano kahor.
Waxa ay sheegeen masuuliyiinta Hirshabelle dib u howlgalinta Dekadda Ceel Macaan in ay sahleyso in ay shaqo ka helaan dhalinyaro badan oo shaqo la’aan ahaa, waxa ay sidoo kale tilmaameen in Garoonka Cisaley iyana la howlgalinayo si diyaaradaha qaadka uga soo degaan.
Maamulka Hirshabelle oo ah maamul curdin ah ayaan wali la heyn ilo dhaqaale sida Dekadd shaqeysa iyo garoon weyn, waxaana maamulka horey u sheegeen in la samenayo Dekadd iyo garoon si ay u noqdaan ilo dhaqaale uu maamulku leeyahay